Nhau - Kuzvipira kuwedzera kushandiswa kwesimba rakasimba
Fonera Us: 0086-18758885818
zvakajairika mazino zipi
Y mazino zipi
chibage mazino zipi
machena mazino zipi
QQ mazino zipi
hove dzemeno ehove zipi
Aluminium mazino zipi
ane simba mazino zipi
mazino akaenzana zipi
chiredzo mazino zipi
akawedzera mazino zipi
China mazamu-madziro mazino zipi
mazino emoyo zipi
mafupa mazino zipi
Kutevedzera simbi zipi
Triangle mazino zipi
Sharp triangle meno zipi
mavara earufabheti zipi
zvinhu zvenaironi zipi
Kutevedzera simbi nylon zipi
Nylon meno ane tambo ine mavara
zvakajairika nylon zipi
Flame retardant zipi
mvura isina zipi
High tembiricha nemishonga zipi
Kuzvipira kuwedzera kushandiswa kwesimba rakasimba
Wedzera kushandiswa kwesimba zviwanikwa
Zvese zvigadzirwa uye zvekutakura zvinhu, nekuchinjira kuzvinhu zvinogadzirika, kudzikamisa mutoro pane zvakatipoteredza, kudzikisira kugadzirwa kwemarara kuburikidza nehupenyu hwezvinhu, kudzikisira kushandiswa kwemafuta echisikigo, uye kubatsira mukuzadzikwa kwenzvimbo yakatenderera.
Deredza kushandiswa kwemvura, simbisa manejimendi yetsvina nemvura yakasviba,
Mukuona kwematambudziko ari kuwedzera ekushomeka kwesosi yemvura uye kudzikira kwehunhu hwemvura, yakazvipira kudzikisa huwandu hwemvura inodikanwa mukugadzira nekushanda, uye kudzikisa mutoro wezvakatipoteredza wekurasa tsvina.
Deredza kunwa kwemvura nekutarisa mukugona kwemvura uye kushandisa zvakare munzvimbo dzekugadzira munzvimbo dzine matambudziko emvura.
Tevera zvimiro zvekambani zvinoenderana nemitemo yehurumende nemirau nemaindasitiri akadai seZDHC (Zero Discharge yeHazardous Chemical Substances) uye nekugadzirisa maneja emvura patsvina munzvimbo dzese dzekugadzira.
Kutungamira uye kudzikiswa kwemakemikari zvinhu
Kuti uve nechokwadi chehupenyu hwakapfuma kuzvizvarwa zvinotevera, kambani inoderedza kukanganisa uye mutoro wemakemikari pane zvakatipoteredza.
Kubva pamatanho emabhizimusi akadai seMRSL (Rinovharirwa Rondedzero Yezvemagetsi paKugadzira Nguva) zvichibva paZDHC (Zero Discharge yeHazardous Chemical Substances), gadzirisa mashandisirwo emakemikari muzvinhu zvese zvegadziriro kubva pakuenda-kunze kuti uwedzere kudzikisira kushandiswa zvemakemikari zvinhu.
Gara nemitemo yeindasitiri yakadai seyakajairwa 100 naOeko-Tex kubvisa kushandiswa kwezvinhu zvinorambidzwa mune zvigadzirwa.
Gadzira nzira nyowani dzekugadzira kudzikisira kuburitsa kwemakemikari anokuvadza.
Remekedza kodzero dzevanhu uye chengetedza nzvimbo yakanaka uye yakachengeteka yekushanda
Isu tinokoshesa pfungwa yepasirese yekuremekedza chiremera nekodzero dzevanhu vese uye tinopa kune yakasiyanasiyana uye inogara nharaunda.
Kuburikidza nekucherechedzwa uye kuremekedzwa kwekodzero yemunhu yakazara
Post nguva: Jan-09-2021
indasitiri nzvimbo tangqiaotang zhang jiagang guta china